Location: musha » Kutumira » Waini & Midzimu » Waini dzeSpain: Ravira Musiyano Zvino
Mufananidzo nerubatsiro rwaE. Garely
Ini nguva pfupi yadarika ndakava nemukana wekuziviswa kune imwe sarudzo yewaini yakasarudzika uye inonaka kubva kuSpain.
Kirasi yaTenzi yaitungamirwa naAlexander LaPratt anga ari Sommelier kuLe Bernardin, DB Bistro Moderne, neFrench Laundry pamwe nemukuru Sommelier weChef Jean Georges Vongerichten. Muna 2010 LaPratt yakakunda iyo NY Ruinart Chardonnay Challenge (chiitiko chekuravira bofu). Muna 2011 LaPratt akasarudzwa kuve Akanakisa Sommelier muAmerica pamakwikwi eAmerican Sommelier Association ndokuiswa pechipiri muChaine de Rotisseurs Best Young Sommelier National Finals.
Wine & Spirits Magazine yakawana LaPratt kuve "Best New Sommelier" (2011), uye akamiririra US muYakanakisa Sommelier yeWorld Competition muTokyo (2013). Muna 2014 aive munhu wechi217 akapasa bvunzo yaanoshuvira Master Sommelier.
Alexander LaPratt, Tenzi Sommelier
LaPratt inhengo yeL'Order des Coteaux de Champagne, akagamuchira Diplome d'honneur kubva kuAcademie Culinaire de France, ndiye akatanga nhengo yebhodhi uye mubati wehomwe weThe Best Sommelier muUS Organisation. Pamusoro pezvo, LaPratt ndiye muridzi weimwe imba yekudyira yeAtrium DUMBO (Michelin yakakurudzirwa), uye anogamuchira Mubairo Wepamusoro Wekunaka kubva kuWine Spectator (2017, 2018, 2019). Iye zvakare inhengo yeFaculty yeInstitute of Culinary Education.
Iwaini yeSpain (Yakagadzirirwa)
1. 2020 Gramona Mart Xarel·lo. Organic rose waini. ITA Penedes. Mazambiringa akasiyana-siyana: Xarel-lo Rojo.
Mhuri yekwaGramona yakatanga kupinda muwaini muna 1850 apo Josep Batlle akatarisira munda wemizambiringa wemhuri yeko. Pau Batlle (mwanakomana waJosep) akanga ari mubhizimisi rewaini yekoki uye akatanga kutengesa mazambiringa newaini yakagadzirwa kubva kuLa Plana kuvarimi vanopenya muFrance avo vakanga vachitarisana nekuparara kwephylloxera.
Muna 1881, Pau akatenga munda wemizambiringa weLa Plana, uye akatanga Celler Batlle achiziva kuti Xarel.lo, mazambiringa echivanhu cheCatalunya, akabatsira mukubudirira kwake kutengesa waini kuFrance nekuda kwekugona kwayo kugadzira waini yakare-kare inopenya. Nhasi minda yemizambiringa inoshandiswa naBartomeu naJosep Lluis, vachimisikidza cuvees inocherechedzwa nzvimbo yacho.
Waini inogadzirwa kuGramona inorimwa organically (CCPAE) uye mahekita makumi manomwe nemaviri anorimwa biodynamically (Demeter). Mhuri inosimudzira kusimudzira muzvigadzirwa zvavo nekudzikisa kabhoni tsoka yavo vachishandisa geothermic simba uye kudzoreredza mvura yese inoshandiswa pachivakwa.
Mawaini anobva kuGramona ane avhareji yekuchembera kupfuura chero imwe waini inopenya kubva kuSpain. Makumi masere nematanhatu muzana ewaini inopenya inogadzirwa kuSpain inoburitswa mushure memwedzi mipfumbamwe chete apo kuGramona waini inokura isingaite mwedzi makumi matatu. Ivhu riri paAlt Penedes rinonyanya kuita ivhu reraimu nepo ivhu riri padyo nerwizi rweAnoia rinonyanya kunyura, uye ivhu riri padyo negomo reMontserrat rinowanzoita slate.
Kubva kuminda yemizambiringa yakarimwa yeCavas Gramona, iyo dzvuku varietal, Xarel-lo, inorima mazambiringa anotonhora macerated kwemaawa makumi mana nemasere kuti abvise rakapfava rosy hue kubva pamatehwe. Izvi zvinoteverwa nekuvirisa mumatangi esimbi asina simbi pasi petembiricha inodzorwa. Kubva mumatangi waini inopinda mubhodhoro.
Kuziso, pink yakachenuruka ine mapeji. Mhuno inofara nemuchero wakajeka uye mutsva, uchiratidza mukanwa wakatsetseka, wakatenderera, wakapfava, uri pakati nepakati neacidity yepakati. Yakapfava pamhuno uye mukanwa, inopa mazano epichisi, sitiroberi, uye rhubarb. Kupedzisa kunopa acidity, uye kutsva neanorambira epiniki mhiripiri. Inogadzira aperitif inofadza, uye ichaenderana zvakakwana ne tapas, Caribbean kana South American cuisine.
2. 2019 Les Acadies Desbordant. Kurimwa zvine mwero. Mazambiringa akasiyana-siyana: 60 muzana Garnatxa Negra (grenache), 40 muzana Sumoli.
Mario Monros akatanga Les Acacies sechiito chewaini chidiki muna 2008 muAvinyo (kuchamhembe kweBages Plateau) panzvimbo yakakwirira ye500 m. Iyo winery inopararira mahekita gumi nerimwe yakakomberedzwa nemasango emipaini, mioki, holm oak nemakwenzi (kureva, rosemary uye heather) nerwizi Relat pedyo nepurazi. Iyo purojekiti yakawedzera uye ikava chikamu cheDO Pla de Bages (11), ichigadzira zvidiki zvidiki zvemhando yewaini.
NeDesignation yeOrigin Pla de Bages wineries inoenderera mberi netsika yekurima waini yakatanga muzana ramakore rechi 19 apo dunhu raive neminda yemizambiringa yakawanda muCatalonia. Iyo wineries inonyanya kubatwa nemhuri, uye vese vane munda wavo wemizambiringa, vachiunza tsika, uye yakasarudzika mwero wekutarisira kumiti yemizambiringa inoguma nemhando yepamusoro yewaini. Parizvino kune gumi nemana wineries neDO Pla de Bage.
Les Acacies inoshandisa micro vinification process iyo inobvumira diki batch kugadzirwa inobvumira iyo Winery kuwana yakanakisa kutaura kwega ega siyana uye terroir yayo. Kukohwa mazambiringa nemaoko nemabhini madiki; 20 muzana mazambiringa akazara ane madzinde evhu nezvinonhuwirira zvakasanganiswa. Akwegura mumatangi esimbi pamwe nematangi esimende, ovoid, uye amphorae akatenderedza tannins uye anowedzera maruva manotsi.
Kuziso, puramu dzvuku ine violet mazano apo mhuno inowana yakanyanya kutsvuka muchero mutsva, uye maruva. Iyo mukanwa inonakidzwa nematannins akasanganiswa ane kutapira kusinganzwisisike. Shingairira nesoseji inonhuwira kana zvimedu zvegwayana, kana maburger.
3. 2019 Anna Espelt Pla de Tudela. Organic Mazambiringa akasiyana. 100 muzana Picapolla (Clairette).
Anna Espelt akatanga kushanda nevarime vemhuri yake, Espelt viticultors muDO Emporda muna 2005. Akadzidza kudzoreredza pekugara nekurima zvine chinangwa - kuti aunze hunhu hwake kumhuri yemahekita mazana maviri. Naiye Pla de Tudela anopa mutero kuzviuru zvemakore zvekudyidzana pakati pemadzitateguru ake nenyika yavanogara. Iyo varietal inozivikanwa nekugona kwayo kuchengetedza acidity kunyange mumamiriro ekunze anodziya. Picpoul zvinoreva “kuruma muromo,” zvichireva kuti mazambiringa ane asidhi yakawanda kwazvo. Munda wemizambiringa unotarisa pakukura kwakasiyana kubva kuMedithera neEmporda: Grenace Carinyena (Carignan), Monastree (Mourvedre), Syrah, Macabeo (Viura) y Moscatel (Muscat).
Anna Espelt anokohwewa nemaoko, achiteverwa nekutonhodzwa kwemaawa makumi maviri nemana, obva azvidzwa zvishoma uye nekutsikirirwa zvinyoronyoro. Mbiriso yechisikigo inoshandiswa kuvirisa mutangi uye yakura kwemwedzi mitanhatu mumazai ekongiri. Certified organic (CCPAE), iyo terroir inoumbwa neslate, yakavharwa negranite. Saulo ivhu rejecha rinobva mukuora kwegranite uye slate ndiro rinokonzeresa kuibva, kuwedzera tannic uye waini ine simba.
Kune ziso, waini inopa yakajeka uye inopenya yero ine zviratidzo zvegirinhi / goridhe. Mhino inowana citrus, uye matombo akanyorova apo mukanwa unonakirwa nemunyu wakatsetseka unotarisirwa kubva kune minerality yeCap de Creus. Pairi nema oyster, gakanje, clams, mussels, uye sushi, huku yakagochwa, uye pad Thai.
4. 2019 Clos Pachem Licos. 100 muzana chena organic chena Grenache kubva kuGandesa, DO Terra Alta. Clay-limestone ivhu.
Clos Pachem iri pakati peGratallops (DOQ Priorat). Munda wemizambiringa unorimwa zvine mutsindo zvichitevera biodynamic protocol. Iyo cellar inogadzirwa ichishandisa dhizaini yekuvaka, uye yakagadzirwa neHarquitectes (harquitectes.com, Barcelona). Yakavakwa nezvinhu zvechisikigo, zvekutanga, uye zvinogara kwenguva refu, nzvimbo yepakati nevhavha huru (yekuvirisa) ine madziro akakora uye makamuri emhepo kuchengetedza chivakwa 100 chefiriji chinopa kugadzikana kwakakwana kwehydrothermal.
Mazambiringa anokohwewa kaviri: Nyamavhuvhu naGunyana. Kukohwa nemaoko mumatambudziko e12 kg, nekutanga kusarudzwa kwemazambiringa akaitwa mumunda, achiteverwa nesarudzo yechipiri muwaini. Mazambiringa anobva munzvimbo dzakasiyana anosimbiswa zvakasiyana patembiricha inodzorwa mumatangi esimbi. Kuviriswa kwedoro kunoitwa patembiricha inodzorwa. Pasina malolactic fermentation, mavhati anosanganiswa, uye akwegura kwe8-mwedzi mumatangi esimbi asina tsvina kuchengetedza acidity uye kutsva.
Kuziso - girini ine goridhe rakakwirira. Mhino inowana kunhuhwirira kubva muchero (maapuro nemapeya), marimu nemaremoni, zvichigadzira ruzivo rwakajeka uye rwakachena rwepalate inosanganiswa nemashoko emishonga inonhuhwirira uye uchi. Waini yakaenzana ne acidity yakanaka. Inomira yakasimba - yega, kana kubatanidza nehove nehove yegungwa, miriwo, uye chizi nyoro.
Kuti uwane rumwe ruzivo, tinya pano.
Iyi nhevedzano yakatarisana neWines yeSpain:
Verenga Chikamu 1 Pano: Spain Inosimudza Mutambo Wayo Wewaini: Zvakawanda Kupfuura Sangria
Dzimwe nhau pamusoro pewaini
Caribbean Furanzi Motserati Speini Tokyo waini